Fikradaha laga aaminsan yahay Hindiya | Safarka Absolut
Bulshadan maanta joogta, fikirka fikirka khaldan ayaa sii kordheysa muhiimad gaar ah. Waxaan ku noolahay hareerahooda, waa lagu celceliyaa ama waa la dhaleeceeyaa sababtoo ah waxay ku xiran yihiin nacayb. Waa mid ka mid ah arrimaha ugu muranka badan ee sida joogtada ah dib loogu eegayo.
Socdaalku waa daawada ugufiican fikradaha xun xun iyo eexashada. Waxay maskaxdeena u fureysaa kun siyaabood waxayna naga dhigeysaa inaan u bislaano fahamka adduunka iyo, guud ahaan, waxyaabo badan oo nolosha ah.
Wadammada oo dhami waxay leeyihiin aragtiyo kala duwan. Tusaale ahaan Ingiriiska cunnadiisa waa mid aad u xun, in Faransiiska ay aad ugu faanaan ama in Isbaanishka qof walba uu yaqaan sida loo dheesho flamenco. Wax la mid ah ayaa ka dhaca dalal fog sida Hindiya. Laakiin, Maxay yihiin fikradaha ugu caansan ee laga haysto Hindiya?
1 Waa maxay fikrad khaldan?
2 Maxay yihiin fikradaha laga aaminsan yahay Hindiya?
2.1 Had iyo jeer taxaddar ku samee cuntada Hindida
2.2 Hindidu waa maslaxada masaska
2.3 Hindidu waa sabool, laakiin way faraxsan yihiin
2.4 Hindiya waa qasan tahay waana la dayacay
2.5 Hindidu waxay ku hadlaan Hindiga
2.6 Dhammaan dumarka Hindida ah waxay xirtaan saris
2.7 Dhamaan Hindida waxay sameeyaan yoga waxayna dhahaan Namaste
2.8 Lo'da ayaa meeraysata waddooyinka
Waa maxay fikrad khaldan?
Sida laga soo xigtay RAE (Royal Spanish Academy) fikrad khaldan waa "sawir ama fikrad ay inta badan aqbalaan koox ama bulsho leh dabeecad aan la beddeli karin." Taasi waa, aragti guud oo ah waxa qof laga rumaysan karo oo ku saabsan koox dad ah oo leh astaamo, tayo ama dhaqan. Fikradahaas fikradaha laga aaminsan yahay ayaa ah kuwo bulsho lagu dhisay oo fikrad ka bixinaya astaamaha ama caadooyinka goobta.
Maxay yihiin fikradaha laga aaminsan yahay Hindiya?
Had iyo jeer taxaddar ku samee cuntada Hindida
Cunnada Hindida waa dhadhan fiican! Si kastaba ha noqotee, waxaad u badan tahay inaad maqashay marar badan, taas Markii aad u safreyso dalka waa inaad taxaddartaa maxaa yeelay waxaad dareemi kartaa xumaan haddii aad wax ku cuntid meheradaha waddooyinka. Xaqiiq ahaan, tani waa wax ka dhici kara meel kasta haddii aan cuntada ka iibsanno meelaha nadaafadda laga shakiyi karo ama haddii aan cabno biyo aan dhalo ku jirin.
Iyada oo la raacayo tilmaamaha ugu yar, waxaad ku raaxeysan kartaa cunnada Hindida adiga oo aan ku xanuunsanaynin socotarka 'safarka' ee caanka ah ama aad la il darantahay toban meelood meel xummad ah. Looma baahna waswaas!
Dhinaca kale waxaa jira fikrad khaldan oo ku saabsan in cuntada Hindida oo dhami ay leedahay basbaas. Dad badan ma jecla ama ka labalabeyn inay tijaabiyaan cuntada Hindida maxaa yeelay waxay rumeysan yihiin in dhammaan suxuunta ay yihiin kuwo aad u basbaas badan oo waxay siin doontaa calool xanuun maadaama aan looga baran, laakiin wax runta ka fog ma leh.
Kani waa hadalheyn sababta oo ah cunnada Hindida oo dhami ma ahan kuwo basbaas leh. Xaqiiqdii, waxaa jira suxuun aan ahayn sida Dal Makhani, oo ah maraq digir ah oo lagu kariyey caar la kariyey. Ama maraqa korma, oo ah nooc curry khafiif ah laga sameeyay lowska iyo kareemka. Ma ilaabi karno midkood suugada raita, ee lagu sameeyay qajaar iyo caano fadhi oo dib u cusbooneysiin doonta saxan kasta.
Hindidu waa maslaxada masaska
Dad badan ayaa aamminsan in Hindidu ay yihiin kuwa masaska xanta. Si kastaba ha noqotee, xaqiiqadu waa taas dhaqanka masaska soo jiidashada leh ayaan sharci ka ahayn meelaha qaarkood sidaa darteedna waa ka mamnuuc Hindiya, in kastoo qaar ka mid ah jileecyada masaska ay wali jiraan.
Hindidu waa sabool, laakiin way faraxsan yihiin
Markii uu soo baxay filimka Slumdog Millionaire, faqriga ayaa ka muuqday xaafadaha isku raranta ah ee tallaabada laga qaaday saameyn weyn ayuu ku yeeshay sida Hindiya looga arko adduunka intiisa kale. Dad badan oo safar ah ayaa la yaabay markay arkeen xaaladda saboolnimada ee dad badani ku nool yihiin Hindiya, adoo dhoola cadeynaya dhibaatooyinka maalinba maalinta ka dambeysa. Laakiin liddi ku ah aaminaadda caanka ah, waddanka oo dhan ma liito.
Qaar ka mid ah dadka ugu qanisan meeraha ayaa ku nool Hindiya iyo xilliyadan dambe fasal dhexe oo kobcaya ayaa soo ifbaxaya sababo la xiriira horumarinta waxbarashada iyo shaqada. Dad aad u tiro badan ayaa ka baxsanaya saboolnimada waxayna gaarayaan nolol wanaagsan.
Hindiya waa qasan tahay waana la dayacay
In kasta oo ay jiri karaan aagag ka qalabeysan oo taraafikada mararka qaar fowdo ah, Hindiya sida waddammada oo dhan waxaa kale oo ka jira aagag ay ku nastaan ​​jardiinooyin, hudheelo raaxo leh iyo xarumo wax laga iibsado, makhaayado wanaagsan iyo caweeyo lagu caweeyo.
Hindidu waxay ku hadlaan Hindiga
Aragtidaani waxay ku baahday dibedda. Dad badan ayaa si qalad ah u rumaysan in erayga "Hinduus" loola jeedo diinta iyo afka rasmiga ah ee Hindiya labadaba. Si kastaba ha noqotee, tani maahan tan iyo markii luqadda loo yaqaan Hindi halka kuwa ku dhaqma Hinduuga loogu yeero Hindus.
Dhinaca kale, Hindiga maahan luuqada kaliya ee wadanka kajirta maadaama gobol walba uu leeyahay afkiisa. Dad badan oo safar ah way layaabaan markay ogaadaan inay jiraan dad Hindi ah oo aan ku hadlin Hindiga laakiin waa xaqiiqo. Xaqiiqdii, Hindi laguma dhigo iskuulada qaarkood tanina waa gaar ahaan dhacda Koonfurta Hindiya halkaasoo looga hadlo luqadaha asalka Dravidian.
Hindiga waa luqad inta badan looga hadlo Waqooyiga Hindiya laakiin dad badan oo Hindi ah waa afkooda labaad. Ingiriiska, dhanka kale, waxaa si ballaaran looga hadlaa waddanka oo dhan.
Dhammaan dumarka Hindida ah waxay xirtaan saris
Sari waa dharka dhaqameed ee haweenka Hindiya waana astaan ​​dhaqameed. Ereyga "sari" wuxuu ka yimid Sanskrit oo macnahiisu yahay "maro band" maxaa yeelay dharkaan waxaa lagu sameeyay gabal aan kala go 'lahayn oo loo maro madaxa korna ugu duuban haweeneyda jirkeeda sidii go'.
Waa suud qurux badan, xarrago leh oo aan waqti lahayn. Si kastaba ha noqotee, haweenka Hindida ah ma xirtaan oo keliya saris maadaama ay badanaa xirtaan noocyo kale oo dhar ah, mid rasmi ah iyo mid caadi ah. Tusaale ahaan, adeegsiga maalinlaha ah waxaa jira haween xirta kaamirada loo yaqaan 'salwar kameez' (oo ka kooban jaakad dabacsan iyo surwaal ay weheliso masar) gaar ahaan Waqooyiga Hindiya. Qaar kale waxay doortaan dharka reer galbeedka ee magaalooyinka waaweyn iyagoo isku daraya labada moodba.
Dhamaan Hindida waxay sameeyaan yoga waxayna dhahaan Namaste
Yoga waa ficil in, iyada oo loo marayo qaabab kala duwan iyo jimicsi, isku xira neefta, maskaxda iyo jirka. Hindidu waxay ogtahay faa iidooyinkeeda qarniyo badan laakiin reer galbeedka waa waqtiyadii ugu dambeeyay markii ay noqotay mid caan ah. Tani waa sababta ajaanib badani uga fikiraan Hindiya iyo dhaqankooda makka ruuxiga ah. Si kastaba ha noqotee, maahan Hindida oo dhami inay nolol maalmeedkooda ku daraan yoga. Tani waa fikrad khaldan.
Dhinaca kale, in kasta oo erayga namaste uu qayb muhiim ah ka yahay dhaqanka waddanka, haddana magaalooyinka waaweyn hadda loogu talagalay xaaladaha rasmiga ah ama la falgalka dadka da'da ah. Intaas waxaa sii dheer, waxay aad ugu badan tahay gobollada waqooyiga halkaasoo looga hadlo Hindi saafi ah halka ay aad ugu yartahay koonfurta Hindiya halkaas oo Hindi aysan aheyn luqadda koowaad.
Lo'da ayaa meeraysata waddooyinka
Mid ka mid ah sawirradii ugu horreeyay ee maskaxda ku soo dhaca marka aan ka fikirno Hindiya waa lo 'muqaddas ah. Dhab ahaantii miyay ku meeraystaan ​​waddooyinka magaalooyinka Hindiya? Taasi waa sax, fikirkaas qaldan waa run. Waqti kugu qaadan maayo inaad aragtid iyagoo socod ku maraya magaalo kasta. Waxay si deggan ugu socdaan taraafikada, sidaas darteed darawallada waa inay ka taxaddaraan inay ka fogaadaan shilalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Fikradaha ku saabsan Hindiya